निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नायिकहरु जब समलिंगी बनेपछि... ! दर्शकहरुलाई कस्तो लाग्न सक्छ ? प्रश्न यो हैन, नेपालमै सायद पहिलो पटक समलिंगी विषयमा बनाइएको छ म्युजिक भिडियो ।
यसमा रोल खेलेका छन् नायिक दुई निशा अधिकारी र दिया मास्केले । ‘अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छ’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएसँग अहिले चर्चामा छ समलिंगी जोडीको रोल ।
यो भिडियोमा नायिका निशा र दिया एकअर्काबिना बाँच्नै नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन् । ‘दि ब्ल्याक हब्क’ नेपाल ब्यान्डको शब्द, संगीत, एरेन्जमेन्ट रहेको गीत ‘खोइ मेरो देश’ एल्बममा समेटिएको छ ।
‘अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहान्छु’को म्युजिक भिडियो वेभ म्यागजिन प्रोडक्सन टिमको छायांकन र सम्पादनमा तयार भएको हो । राज केसीले निर्देशन गरेको भिडियोमा नायिका निशा अधिकारी र दिया मास्केलाई समलिंगी भूमिकामा छन् ।
दिया टाढा हुँदा निशाको तड्पाइ, दियाबिना बाँच्नै नसक्ने र अन्तिममा सँगै मर्ने भिडियोमा देखाइएको छ ।
समलिंगीका अन्य धेरै व्यवहार पनि यसमा समेटिएको छ एक्स्क्लुसिभ तरिकाले ।
१७ भदौ, २०७३